खबरदार : कुलमानलाइ तर्साउनेहरु हो । | NepalDut
बिनोद त्रिपाठी काठमाडौं
आज म नयाँ कुरा जानकारी दिनेछु । कुलमान घिसिङ र अमनलाल मोदी बिचको बिबाद ‘बिजुलीको तारको भएको ’ समाचार बाहिर आएको छ, यो कुरा बिल्कुल झुट हो । अमनलालको निर्बाचन क्षेत्रमा देखिएको बिद्युत बिस्तारको काम मुख्य कारण होइन । कुलमान घिसिङलाई बिद्युत प्राधिकरणबाट हटाउन सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु यो सरकार गठनको शुरुकै दिनदेखि नै क्म्मर कसेर लागेका थिए र छन् । जनार्दन शर्मा, भीम रावल बाहेक सबैजसोले कुलमानलाई हटाउन पार्टी नेतृत्वलाई भरपुर दबाब दिइरहेका छन् । तपाईलाई लाग्ला, के यो कुरा साँचो हो ? अब हेर्नुस कारण – ।
पछिल्लो पटक कुलमानको पक्षमा चौपट बढेको जनउभारलाई मध्यनजर राखेर सरकारले कुलमानलाई हटाउन नसकेको मात्र हो ।
५, त्यतिबेला जनार्दन शर्माले माफियाहरुको निर्देशन अनुसार शिर्ष नेताहरुको दबाब मानेको भए संभवत आज लोडसेडिङ कायम रहन्थ्यो । भारतबाट बिजुली आयात वा अन्य कारण यसमा गौण थिए । यसको प्रमाण खोज्न तपाईहरुलाई मेलम्चीकै उदाहरण दिन्छु । मेलम्ची खानेपानी आयोजना गत बर्षको असोजमा सम्पन्न हुनेवाला थियो । त्यहि अनुसार, आयोजनाले २०७४ सालको असोजमा पानी बितरण गर्ने प्रचार गरिसकेको थियो । तर, जब विना राना मगर खानेपानी मन्त्री भइन्, तब माफियाहरुले यी विना मगरलाई प्रयोग गरेर काठमाडौंमा आउने पानी रोकिदिए । जनार्दन शर्मा विना मगर जस्तै भइदिएको भए अहिलेसम्म लोडसेडिङ कायमै हुन्थ्यो । त्यसैले, भारतबाट आयातीत बिजुलीको कारण लोडसेडिङ हटेको भन्नु मिथ्या हो ।
७, कुनै दिन कुलमान घिसिङलाई सरकारले डा. गोबिन्द केसीलाई जस्तै शिकार बनाउने र अनेक आरोप करार गरिदिने निश्चित छ । खासगरि, पछिल्लो पटक कुलमानको पक्षमा चौपट बढेको जनउभारलाई मध्यनजर राखेर सरकारले कुलमानलाई हटाउन नसकेको मात्र हो ।
१०, अमनलाल मोदीले कुलमानसंग क्षतिपुर्तिका नाममा घुस माग्नुको कारण अर्के थियो । अमनलालले सत्तारुढ दलका नेताकै अनुरोधमा क्षतिपुर्तिका नाममा पैसा मागेका थिए । कुलमानले पैसा दिए दिन्छ , नदिए यहि बहानामा पदबाट हटाउन पाइन्छ भन्ने पुर्ब गुरुयोजना सत्तारुढ नेकपा नेतृत्वले गरेको थियो । यसैले, सत्ताधारी दलबाट अब पहिलो शिकार कुलमान हुनेमा कुनै शंका छैन । अत : सबै एकजुट भएर गत बर्ष झैं फेरि एक पटक सम्पुर्ण जनताले नेपालको पहिलो उज्यालोदाता कुलमान घिसिङलाई साथ दिन आबस्यक छ ।